Mashandiro anoita YouTube Algorithm Inoshanda Muna 2021 - GoViral
Mashandiro anoita YouTube Algorithm Anoshanda Muna 2021
musha » Mashandiro anoita YouTube Algorithm Anoshanda Muna 2021
Kubva YouTube payakatangwa muna 2005, chikuva chave nzvimbo inozivikanwa apo vashandisi vanoona, vanogovana, uye kurodha mavhidhiyo. Kuve yechipiri-hukuru injini yekutsvaga munyika, chave chishandiso chakakosha chevagadziri pamwe nemakwenzi. Inokwezva vanopfuura mabhiriyoni maviri vashandisi pamwedzi. Asi, YouTube inoita sei kuti vese vashandisi vadzokerezve zvimwe? Iyo vhidhiyo chikuva ine algorithm inosimudzira kumusoro runyorwa rwezvakakodzera zvemukati izvo zvinogara zvichiziva izvo izvo vashandisi vanoda kutarisa.
YouTube Tsvaga Algorithm
Nekuda kwekutyaira kubatanidzwa uye kuvaka chiratidzo chako, iwe unofanirwa kunzwisisa iri kubuda SEO yakanakisa maitiro uye azvino YouTube mafambiro. Heano maitiro epuratifomu anoisa mavhidhiyo uye maitiro aungaite ako mavhidhiyo:
Pane maviri akakosha SERP masero ekumisikidza epuratifomu:
Engagement metric (Likes, makomenti, nguva yekutarisa, nezvimwewo)
Kukosha kweshoko kwakanangana nemetadata (Mazwi akakosha, tsananguro, uye zita)
YouTube inofunga nezvekuti zvirimo, zvinyorwa, uye tsananguro zvinowirirana sei nemubvunzo wekutsvaga wemushandisi. Yema metric ekubatanidzwa, kudzokorora uye nguva yekutarisa ndizvo zvinhu zvakakura pane chinzvimbo cheSERP. YouTube zvakare inokonzeresa munhoroondo yekutarisa, apo mushandisi akatarisa mavhidhiyo pane iwo iwo musoro wenyaya, uye mavhidhiyo mangani avakaona kubva kuchiteshi chako. Heano mamwe mamaki ekumisikidza aunofanirwa kuziva nezvazvo:
Maonero evhidhiyo yako anokura nekukurumidza sei (vhidhiyo velocity)
Kangani vashandisi vanodzvanya yako vhidhiyo kubva kune iyo masosi peji
Kakawanda sei iwe uchiisa mavhidhiyo matsva (sezvo mavhidhiyo matsva achiwana chinzvimbo chepamusoro, iwe unofanirwa kugadzira zvinyorwa zvitsva nguva dzose)
Inguvai mushandisi yaanoshandisa paYouTube mushure mekuona yako vhidhiyo (nguva yechikamu)
Chinokosha ndechekuti kana vhidhiyo yako ikapindura mubvunzo wevashandisi uye ichibata kufarira kwavo, iwe unozobatsirwa neyakagadziriswa algorithm yeYouTube.
Kuti uve nechokwadi chekuti SEO algorithm yeYouTube inoshanda mukuda kwako, unofanirwa kukwidziridza metadata yako inosanganisira zita, ma tag, uye tsananguro yemavhidhiyo ako. Pane zvishandiso zveSEO zvaunogona kushandisa kuratidza kutsvagisa kwakakurumbira uye mazwi akakosha aunogona kushandisa. Mazita ezvinzvimbo uye tsananguro dzine kiyi yakakosha zvinogona kuratidzika mukutsvaga kwakakodzera.
Zvinoenderana neYouTube, iwe unofanirwa kunyora tsananguro yeimwe kusvika pandima mbiri kuti upe muono wevhidhiyo yako. Izvo zvakakosha kuti tsananguro iyi iri mumutauro wechisikigo uye ikozvino ingori mazwi akakosha. Nekudaro, iwe unofanirwa kuwedzera akakosha mazwi ekutanga kwekutsanangurwa pamwe neyako yekutanga kiyi muzita. Tsananguro dzako dzekutanga mitsara ichaonekwa paSERP. Saka, ita shuwa kuti inokwezva zvakakwana kuti vashandisi vanyore pavhidhiyo yako.
Chinzvimbo chako chakakanganiswawo nemusoro uye thumbnail yevhidhiyo yako. Kana iwe uine huru thumbnail, ichaita kuti vanhu vade kudzvanya pane yako vhidhiyo uye kuwedzera ako maonero. Iyo zvakare inotaurira YouTube kuti vhidhiyo yako zvemukati zvinoenderana nemubvunzo. Chimwe chinhu chaunoda kutarisa paari ma tag. Matagi anogona kubatsira vanhu kuwana zvemukati zveYouTube.
Kana iwe ukafunga nezveYouTube algorithm uye nekugadzirisa kwayo, iwe unozokwanisa kutora yako YouTube chiteshi kune yakazara zvakasiyana nhanho. Ingo chengeta ziso pane metric uye analytics mishumo, uye iwe uchave wakanaka kuenda.
Zvisinei, hapana chakaipa pakutora rubatsiro. Kana uchida vakasununguka YouTube maonero kubva kuvanhu chaivo mahara, unogona kutora rubatsiro rweGoViral. Ivo vanokwanisa kuendesa maonero, makomendi, zvavanofarira, uye vanyori kubva kuvanhu chaivo nyore uye nekukurumidza. Nerubatsiro rwavo, unogona kuita kuti zvese zviendeswe chaipo kwauri uye kukura chiteshi chako.
Mashandiro anoita YouTube Algorithm Anoshanda Muna 2021 neGoViral Chikwata Chekunyora, 17 August 2021
Maitiro Ekusimudzira Yako YouTube Mavhidhiyo
Kutaura kuti internet yakazara nemvura nezvinyorwa zvingave zvisiri pasi. Miniti yega yega, tani yezvinyorwa iri kuburitswa mumapuratifomu akasiyana seYouTube kubva kuvanhu vanobva pasirese. Zvisinei, nekuda kwekuti…
Maitiro Ekuwana Mahara YouTube Views yeChannel Yako?
YouTube, yechipiri-yakakura saiti yekutsvaga, ipuratifomu inozivikanwa yekusimudzira, kufadza uye kudzidzisa vaoni. YouTube ine vanopfuura mabhiriyoni makumi maviri nemaviri evashanyi makota, neyakajairwa mashandisiro emaminetsi anopfuura makumi mana. YouTube inozivikanwa ...
Zvikonzero Zvitatu Zvako YouTube Chiteshi Haisi Kukura Uye Maitiro Ekuvakunda
Kukwira kumusoro paYouTube yekubudirira manera haisi chinhu chiri nyore. Vazhinji vako vanogona kunge vaona kuti chiteshi chako cheYouTube-zvisinei kuti unonzwa zvakanaka sei zvemukati-hazvikure sezvaunotarisirwa. Kushushikana…
GoViral Chikwata Chekunyora
Mazano Ekuita YouTube Vhidhiyo Vanyoreri Vako Vanoda Kuona
Mazano Anokurumidza Kutanga Yakabudirira Tech YouTube Channel
Heino Chikonzero Nei Uchifanira Kufunga Kuenda kuYouTube Premium
Mashandisiro EmaHashtag Nehungwaru Pane Yako YouTube Channel
Wana mahara YouTube maonero, vakasununguka vanyoreri veYouTube, emahara YouTube makomendi uye emahara YouTube kufarira uchishandisa yedu yakapusa & inoshanda network.
Bhenefiti yekushandisa GoViral